Carruur nafaqo-darro ugu dhimatay Diinsoor
Photo | Keydka sawirka: Sicir-bararka Diinsoor wuxuu sababay inuu waalidka cunto u waayo carruurtiisa/Xusni/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 22 January, 2016 BAKOOL
(ERGO) - Waxaa sii kordheysa tirada carruurta nafaqo-darrada ugu dhimaneysa degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Wiil 8 bil jira oo 21-kii Jannaayo nafaqo-darrada u dhintay ayaa tirada carruurta dhimatay saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ka dhigaya 21 carruur ah oo ay da’dooda ka yar tahay shan sano. Xarun yar oo caafimaad oo ah tan keliya ee degmadaas ku taalla waxaa hadda nafaqo-darrada u jiifta 60 carruur ah oo 25 ka tirsan Khamiistii la seexiyay.
Nafaqo-darrada waxaa sababtay cunto-yari ka dhalatay waddooyinka soo gala degmadaas oo siddeeddii bilood ee la soo dhaafay ay go’doomisay Al-Shabaab. Wuu yaraa roobkii deyrta ee ka da’ay Diinsoor oo sanadihii la soo dhaafay aan helin roob ku filan. Dadka deegaanka oo beeraley u badan wax dalag ah uma beerna biyo-yari darteed.
Xarun ka shaqeysa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo uu gacanta ku hayo urur maxalli ah ayaa lagu daweynayaa carruurta ay nafaqo-darrada soo ridatay. Saalax Xaaji Maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee xaruntaas ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in bukaannada ay siiyaan dawooyin aan badneyn iyo buskut lagu nafaqeeyo. Hase yeeshee ay mararka qaar dhacdo in dib loogu soo celiyo carruur ay daweeyeen cunto-yarida jirta darteed.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Diinsoor Xasan Maxamed ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ay meel halis ah mareyso heerka cunto-yarida ka jirta degmada. Wuxuu sheegay in kontonka kiilo ee bariiska oo la iibin jiray 300,000 So.Sh ($13.5) uu hadda gaaray 600,000 So.Sh ($27). Xasan ayaa xusay in sicir-bararka uu sababay inay cunto iibsan waayaan dadka deegaanka oo keydkii cuntada uu ka dhammaaday, xayiraaddana ay u dheer tahay shaqo la’aan.
“Waxaan ka walwalsanahay wiilkeyga oo marka aan xaruntan ka saaro aan u heli karin cunto aan siiyo,” ayay tiri Safiya Aadan Cabdullaahi oo la joogta wiilkeeda oo 3 jir ah oo nafaqo-darro laga daweynayo. Waxay sheegtay in ay soo hagaageyso xaaladdiisa caafimaad balse aysan haysan lacag ay ku iibsato cunto.
Deeqo Maxamed Cali waxay Raadiyo Ergo u sheegtay lix carruur ah oo ay dhashay inay inta badan qadaan, maaddaama aanay u heli karin cunto ay siiyaan. “Aniga iyo aabbahood shaqo ma hayno,” ayay tiri. Waxay hadda xarunta kula jirtaa wiil ay dhashay oo 2 jir ah oo ay soo ridatay nafaqo-darrada.
Way kordheysay nafaqo-darrada saddexdii bil ee la soo dhaafay, sida uu sheegay Saalax. “Tirada carruurta aan qaabbilnay muddadaas waxay gaaraysaa 685 carruur ah,” ayuu yiri. Wuxuu sheegay in xaruntooda aanay ku filneyn inay daboosho baahida caafimaad ee ka jirta Diinsoor oo aan lahayn wax isbitaal ah.
Xasan Maxamed ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, maamulka Koonfur-galbeed iyo hay’adaha samafalka ka codsaday inay u soo gurmadaan dadka Diinsoor oo habka keliya ee gargaar lagu gaarsiin karo ay tahay in diyaarad la adeegsado.